Kubhede Uhlelo Emcimbini Womsakazo – eHowzit
Kubhede Uhlelo Emcimbini Womsakazo
By Thami Nkosi
Kubhede uhlelo emcimbini wokuwashwa kwezimoto obuhlelwe ngumsakazo wabantu abasha I uGu Youth Radio ezinkundleni zemidlalo zase St Martins de Bores njengalokhu kuvele kugcine kufika abayidlanzana kanye kanye nabantwana besikole abafunda eSt Martins.
Iqoqwana labantu nezimoto ebezingevile kweziyi-9 lizijabulise ngomculo wamahhala kuyiSonto zingama-19, njengalokhu abaculu kade beshiyelana inkundla kulomcimbi obungenalo isasasa.
Ngokusho komphathi nokuthiwa uzibiza nge Chief Executive Officer wesiteshi uMnu Siyabonga Mkhungo ukhale kakhulu ngokungamaketheki komcimbi wabo kanye nokuqala sekudlule isikhathi njengalokhu ethu bahlangabezane nengwadla yokuhamba kukagesi ngesikhathi belungiselela ukuqala nathi bagcine cebezama I generator athe ifike sekuhambe isikhathi.
“Asijabulanga neze ngendlela okwenzeke ngayo siqale saba nenkinga kagesi saphinde kwamele sizame ukuthola I generator nayo yafike yasinikeza izinkinga sagcina sesiqale kamuva kakhulu kunesikhathi ebesisihlelile. Besihlele ukuthi into yethu iqale ngehora le 9h00 kodwa sagcina siqale sekudlule ngisho elokuqala ihora , futhi ngikhala kakhulu ngokungamaketheki kwesiteshi sethu njengalokhu siphusha iziqubulo ezimbili esokuqala esithi “The voice of Ugu Youth nesithi Kzn Nomber one yoth radio” kubeka uSodi nobebonakala ukuthi akeneme neze njengalokhu kade etatazela into engapheli.
Abanye babaculi no Dj bagcine bengasagibelanga esiteji ngenxa yokucikwa isimo abebesibona.